GADZIRISA PLAYSTATION 'KANGANISO YAKAITIKA' PAKUSAINA - NYORO
Gadzirisa PlayStation Chikanganiso Chakaitika paKusaina
Makodhi ekukanganisa anozivikanwa nedambudziko, asi kusava nekodhi yekukanganisa zvachose kunogona kuve nzira inoshatirisa. Izvo zviri nyore kugadzirisa dambudziko rawakatora kungave pane yako koni kana pane chimwe chishandiso nekutsvaga kwewebhu kuri nyore kwekodhi yekukanganisa. Asi mune ino kesi, hapana ruzivo rwakawanda maererano nechikanganiso runopihwa mushandisi.
Iko kukanganisa kusingazivikanwe kunogona kuve mushanyi anowanzo shanya kune yako PlayStation 4 kongiresi sezvo ichingobuda ine imwe inotyisa meseji Pane kukanganisa kwaitika uye hapana rumwe ruzivo. Kanganiso iyi inowanzoitika uchitora PS4 yako kana kuyedza kusaina muprofita yako yePSN. Dzimwe nguva zvinogona kuratidzika paunenge uchichinja marongero ako eakaunzi, asi zvisingawanzo kuitika panguva yemutambo.
Muchikamu chino, tichave tichienda pamusoro penzira dzakawanda kugadzirisa kodhi yePlayStation isina kodhi yekukanganisa.
Maitiro ekugadzirisa PlayStation Chikanganiso Chakaitika (hapana yekukanganisa kodhi)?
Maitiro 1: Simbisa uye gadziridza yako PSN Akaundi Ruzivo
Maitiro 2: Gadzira account nyowani yePSN uchishandisa email kero nyowani
Maitiro 3: Pinda muakaunti yako kubva pane rakasiyana koni
Maitiro 4: Chinja yako Yakavanzika Kugadzika ku 'Hakuna Mumwe'
Maitiro 5: Chinja yako Domain Name System (DNS) Kuisa
Maitiro 6: Dzinga tambo yemagetsi
Maitiro 7: Gonesa kana kugonesazve maviri-Matanho Verse
Kunyangwe hazvo kukanganisa uku kuchinzwa kusanzwisisika uye kusanzwisisika, pane mashoma akajeka uye akapusa nzira kuti aende. Kubata yako PSN account marongero kuchaita hunyengeri kune vakawanda vamwe vangatofanira kuyedza kushandisa account yavo pane imwe koni. Kungoburitsa tambo yemagetsi kana kushandura iyo DNS yekugadzika zvakare mhinduro inoshanda. Imwe yemaitiro ataurwa pazasi akapusa uye anokurumidza, kuti iwe ugone kudzokera kumashure pakutamba mutambo waunofarira.
PlayStation Network (PSN) account inochengetera uye inoenderana neyako ruzivo uyezve inoita kuti iwe utenge pamhepo kurodha pasi mitambo, mafirimu, mimhanzi, uye mademo.
Iko kukanganisa kunogona kunge kwakakonzerwa nekuti wakamhanyira kutanga kutamba pane ichangotengwa koni pasina kuongorora yako PSN account kutanga. Kuongorora nekuvandudza ruzivo rweakaundi yako kunogona kubatsira mukudzivirira kodhi yekukanganisa uye zvinokubatsira iwe kuwana mukana kune mamwe maratidziro enetiweki.
Tevera matanho ari pazasi ekuvandudza uye ongorora yako PSN account ruzivo kugadzirisa iyi nyaya.
Nhanho 1: Pakombuta yako kana foni vhura yako email inbox. Ita shuwa kuti iwe unosaina mune imwechete email kero iyo yakashandiswa kumisikidza yako PSN account.
Nhanho 2: Mubhokisi rako rekushandisa, tsvaga tsamba dzakatumirwa ne PlayStation. Unogona kuita izvi zviri nyore nekutsvaga ' Sony 'Kana' Mutambo we play station ’Mubhawa rekutsvaga.
kodhi yekumira: driver_irql_not_less_or_equal
Tsamba yacho inokumbira kusimbiswa kweemail yako kero, kuti udaro, tinya chete pane iyi link yakasungirirwa mutsamba. Paunenge iwe wasimbisa, haufanire kuwana iyi kukanganisa zvakare.
Ongorora: Kana nguva yakareba yapfuura kubva pakagadzirwa account yako yePSN saka chinongedzo chingangodaro chapera. Pakadaro, iwe unogona kupinda mukati PlayStation's Webhusaiti uye ndokumbira chinongedzo chitsva.
Nyaya dziri mudura rePlayStation Network dzinogona kukonzera kuti mushandisi atadze kuongorora account yake. Kugadzira nekupinda muaccount nyowani kunogadzirisa chero zvikanganiso. Kana iwe uchangobva kutenga koni nyowani, ichi chaisazove hombe dhiri sezvo iwe usiri kuzenge uchirasikirwa chero nekufambira mberi kwako. Ive neshuwa yekuongorora iyo nyowani account munguva uye nenzira kwayo usati washandisa.
1. Tanga yako PlayStation uye uzvifambe kune iyo 'Nyowani Mushandisi' chikamu. Dhinda ' Gadzira Mushandisi 'Kana' Mushandisi 1 'pane PlayStation log-in skrini. Izvi zvinogadzira mushandisi wemuno paPlayStation pachayo uye kwete account yePSN.
2. Sarudza ' Inotevera 'Inoteverwa' Nyowani kuPlayStation Network? Gadzira Akaunti '.
3. Zvino, baya ' Sign Up Zvino '.
4. Nekudzvanya iyo 'Skip' bhatani iwe unogona kuenderera mberi nekutamba mutambo usingaenderane. Rangarira, nekuzvifambisa kune yako avatar pachiratidziro chemukati checonsole yako, unogona kunyorera iyo PSN gare gare.
5. Enda kune chimiro cheMushandisi 1 kana iwe uri kushandisa yako PlayStation kekutanga. Iwe unozofanirwa kuisa yako ruzivo nenzira kwayo uye ichokwadi, tinya iyo ' Inotevera ’Pabhatani rega rega.
6. Kunze kweruzivo rwemunhu, iwe zvakare unozofanirwa kuisa zvaunofarira kuti ushandise marongero eakaundi yako. Izvi zvinosanganisira kugovana, kutumira mameseji, uye kufarira shamwari.
7. Kana iwe uri pasi pegumi nemasere, ipapo iwe unongobvumidzwa chete kutamba mune yepamhepo mode. Iwe unoda mvumo kubva kune munhu mukuru kuti ugone iyo online modhi. Tinokukurudzira zvikuru kuti usapinde zuva risiri iro rekuzvarwa kuti uwane iyo online mode kana iwe uri mudiki sezvo zvichipesana nemitemo yekushandisa kwechigadzirwa.
8. Kana iwe uri pamusoro pemakore gumi nemasere, saka paunenge uchipinda munzira yekubhadhara, kero yakapinda inofanira kunge yakafanana neiya yakashandiswa pabhajeti rako rekadhi. Izvi zvinodzivirira kumwe kukanganisa uye nyaya kubva pakusvika.
maikorofoni isiri kushanda mushure mawindows kugadzirisa
9. Paunenge uchipinda yako email kero uve nechokwadi chekuti ndiyo yawakapinda mauri, sezvo iwe uchagamuchira a chekubatanidza chinongedzo munguva pfupi . Kana iwe usingakwanise kutsvaga email kubva kuchikwata che PlayStation, tarisa iyo spam kana junk folda kamwe . Tsvaga tsamba nekutora 'Sony' kana 'PlayStation' mubha yekutsvaga. Tevedza chinongedzo kuti ugadzire nyowani Pamhepo ID nekupinza zita rako rekutanga uye rekupedzisira. Rangarira, iro zita richave ruzhinji uye rinoonekwa kune vamwe.
Kana uchiri kutadza kuwana email, sarudza ‘ Batsira ’Kuti uchinje email yako kero zvakare kana kubvunza yako PlayStation kuti utumirezve tsamba. Sarudza ‘ Pinda ne Facebook ’Kubatanidza PSN yako neako Facebook account.
Kana iwe uchiziva mumwe munhu zvakare ane yake PlayStation 4 koni, iyi chaiyo nzira inobatsira. Ku gadzirisa PlayStation Kanganiso Yakaitika nyaya, kumbopinda mune imwe console yemumwe. Unogona kugovana rondedzero yeakaunzi neshamwari yaunovimba uye nekuvakumbira kuti vabude vega uye vopinda mune yako kwechinguva.
Tinokurudzira kuti iwe uvepo panguva yekuita uye iwe upinde muaccount iwe pachako nekuti iyi ndiyo nzira yakachengeteka kwazvo yekuona kuti ruzivo rweakaundi ne password hazvikanganiswa. Mushure mechinguva, buda muaccount yako kubva pane iyo koni uye pinda mune yako koni uye tarisa kuti uone kana izvi zvinogadzirisa nyaya.
Yakurudzirwa: Nzira 7 dzekugadzirisa PS4 (PlayStation 4) Kutonhora uye Kukanda
Vabati-maakaunzi vanogona kudzora zviri nyore kuti vanoonekwa sei kune vamwe vashandisi vePlayStation Network nekushandura kwavo kwega marongero. Iyi ndiyo mhinduro kune yakazara imwe seti yematambudziko asi vamwe vashandisi vataura izvi zvinogona kugadzirisa kune yako yazvino. Kuchinja marongero ako epachivande kuita ‘ Hapana ’Yakakodzera kupfurwa sezvo izvi zvinogona kugadzirisa iyi nyaya zvachose. Iyi yekumisikidza shanduko nzira iri nyore nyore uye yakapusa.
1. Batidza koni yako uye famba uchienda kune iyo ' Kumba ’Menyu. Tinya pane iyo giya icon kuvhura 'Zvirongwa'.
2. Pane imwe nguva mune Zvirongwa menyu, tinya pane 'PlayStation Network'. Mune sub-menyu tinya pane 'Akaunti Management' uyezve ' Zvekuvanzika Zvirongwa '. Pano, iwe ungatofanira kuisa yako PlayStation ID password.
3. Mumwe nemumwe sarudza nemaoko maficha aungade kuchinjira Zvekuvanzika uye wozvichinjira ku ‘ Hapana '. Semuenzaniso, pasi pe'Kugovana Ruzivo Rwako 'iwe unowana' Zvekuita & Trophies 'maunowana mukana wekuchichinja kuita' Hapana '. Izvozvowo ndezve 'Kubatana neShamwari' pasi payo iwe paunogona kuchinja marongero ku 'Shamwari dzeVashamwari', 'Shamwari Dzinokumbira', 'Tsvaga', uye 'Vatambi Unogona Kuziva'. Enderera zvakafanana kune 'Kuchengetedza Ruzivo Rwako', 'Meseji sarudzo', uye 'Kugadzirisa Shamwari Yako Rondedzero'.
4. Zvino, dzokera kumenu huru uye tangazve yako PlayStation koni kuti uone kana uchikwanisa gadzirisa PlayStation Kanganiso Yakaitika nyaya.
Iyo Domain Name System (DNS) inoita sebhuku renhare re internet. Tinogona kuwana ruzivo rwunowanikwa online kuburikidza akasiyana mazita mazita (senge izvozvi iwe unenge uchishandisa 'troubleshooter.xyz'). Webhu bhurawuza dzinofambidzana nekushandiswa kweInternet Protocol (IP) kero. DNS inoshandura dura kune IP kero kuitira kuti bhurawuza rako rigone kuwana internet uye zvimwe zviwanikwa zvepamhepo.
windows 10 yekukanganisa tambo yakanamatira mune mudziyo mutyairi
Kuchinja nekutora internet yako kubatana kunogona kubata kiyi mukudzivirira iyi kukanganisa. Ichi chichaita chinja iyo DNS kero Yako wega internet yekubatanidza kune yakavhurika DNS kero inoitwa neGoogle zvakananga. Izvi zvinogona kugadzirisa nyaya uye kana zvikasadaro, iko kutsvagisa kweGoogle kuchakubatsira iwe kuwana chaiyo Vhura DNS kero.
Kana iwe ukatambira iyi kukanganisa paunenge uchiedza kutamba mutambo wako uye pasina imwe yekukanganisa kodhi padivi payo, nzira yakanyorwa pazasi ndiyo yako yakanakisa nzira yekugadzirisa nyaya. Vazhinji vashandisi vakawana mhinduro iyi inobatsira nemitambo yakasiyana siyana, kunyanya mumitambo yakaita saTom Clancy's Rainbow Six Kutyisidzirwa.
1. Kamwe iko kukanganisa kukakwira pane yako koni, zvifambise iwe kune iyo Zvirongwa menyu, uye uwane iyo 'Akaunti Management' sarudzo. Dhinda 'Sign Out' kuitira kuti ugobuda muakaunti yako.
2. Zvino, bvisa PlayStation 4 koni yako zvachose.
3. Kana koni ikavharwa zvachose, kubva kumashure kwekoni, buritsa tambo yemagetsi zvinyoro nyoro.
4. Chengetedza koni yakatemwa kwechinguva, maminetsi gumi nemashanu achaita hunyengeri. Dzorera zvakare tambo yemagetsi zvakanyatso kupinda muPS4 uye dzorerazve.
5. Pinda muakaunti yako zvakare mangoti console yatanga uye wotarisa kuti uone kana uchikwanisa gadzirisa PlayStation Kanganiso Yakaitika nyaya.
Vashoma vashandisi vakataura kuti kuremadza uye kugonesa zvakare-maviri-nhanho yekusimbisa nzira yekuchengetedza seyakakwana uye yakapusa mhinduro. Kana isina kubvumidzwa kare, saka kungo gonesa sarudzo inoita hunyengeri.
Iyo yechipiri-nhanho sisitimu sisitimu inodzivirira mushandisi kubva kune asingadiwe marogi nekuita chokwadi chekuti iwe chete ndiwe unokwanisa kuwana yako account pane iyo PlayStation Network. Chaizvoizvo, pese panowanikwa nyowani nyowani muhurongwa hwako, unozogamuchira meseji ine kodhi yekuongorora iyo ichapinda iwe uchiedza kupinda mukati.
Uyezve Verenga: Maitiro Ekuchinjisa Microsoft Office kune Nyowani Computer?
Maitiro ekushandura iyo Yechipiri-Nhanho Verification mamiriro ari nyore, ingo tevera iyo nzira yataurwa pazasi.
mbr tafura yekuparadzanisa kune gpt
Nhanho 1: Enda kune iyo ' Account Management ’Sarudzo muMenu yeMenu. Dzvanya pane 'Ruzivo rweAccount' uyezve 'Chengetedzo' mune-sub-menyu. Kana yatogoneswa, ipapo tinya pane 'Status' sarudzo, uye mune yekudonha-pasi menyu, sarudza 'Inactive' uyezve 'Simbisa'. Tangazve chigadzirwa uye chigone zvakare.
Nhanho 2: Pinda neakaundi yako ruzivo (kana usati watove). Tsvaga iyo ' Seta izvozvi 'Bhatani riri pasi pe' 2-Nhanho Verification 'uye tinya pairi.
Nhanho 3: Mubhokisi repop-up, nyora yako nhare mbozha zvakanaka uye pinda ' Wedzera '. Kana imwe nhamba yako yawedzerwa, unozogamuchira kodhi yekuongorora pane yako foni. Pinda iyi kodhi pane yako PS4 skrini.
Nhanho 4: Tevere, iwe unozosaina kusaina kubva kuaccount yako uye uwane yekusimbisa skrini. Verenga iyo on-screen ruzivo uye famba nenzira yako kumberi. Wobva wadzvanya 'Zvakanaka' .
internet inongoratidzira windows 10
bvisa zvenguva pfupi mafaera windows 10 isiri kushanda
haigone kuwana internet kana yakabatana ne vpn
windows 10 google chrome nyaya
microsoft micheto inoshayikwa kubva windows 10